Etu esi edozi nrụnye WordPress ma ọ bụ obi ọjọọ
Tuzdee, Machị 15, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu onye ahịa kpọrọ m n'izu a na-eme mkpesa na a na-egbochi saịtị ha n'ihi koodu ọjọọ dị na ya. Ọ bụ saịtị WordPress nke dị na sava na-akọrọ. Kama ịpịa faịlụ ọ bụla site na saịtị ọ bụla na sava ahụ iji chọpụta edemede ogwu ahụ, anyị nwere ike iweghachite saịtị WordPress ma na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na usoro ndị a:
Wepụ ọ bụla ejibeghi, ochie ma ọ bụ ewu ewu WordPress plugins. Ihe mgbakwunye bụkarị isi mmalite nke koodu ọjọọ n'ihi na ọtụtụ ndị mmepe mgbakwunye anaghị arụ ọrụ iji chebe ngwa mgbakwunye ha.
Na-edegharị niile WordPress echichi directories, ewepu wp-ọdịnaya. Ihe Wp-ọdịnaya bụ folda yana ọba akwụkwọ mgbasa ozi gị ebugo na gburugburu ya - yabụ na ịchọghị iwepu ya!
Ntughari isiokwu niile na faịlụ mgbakwunye iji hụ na enweghị koodu ị na-amataghị. Ofzọ ogwu dị ugbu a bụkarị iframe na saịtị ndị ọzọ (mgbe niile na China), ma ọ bụ ngalaba ezoro ezo nke koodu dị na ibe PHP niile. Ga-achọta ma wepu ma ọ bụ hichapụ faịlụ niile nje. Oge ụfọdụ ọ ga-achọ edemede iji gbaa ọsọ na sava gị iji hụ na emezuru nke a. Gụọ Kwụsị Badware maka ozi ndị ọzọ.
Y’oburu n’adighi edebanye aha na saiti gi Njikwa Nchọta Google, ị ga-achọ ịdebanye aha ya. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ịdọ aka na ntị malware na saịtị gị, ị nwere ike ịnwe ozi na igbe ozi Webmaster na-adụ gị ọdụ na ewepụrụ saịtị ahụ n'ihi nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ijide n’aka na saịtị gị dị ọcha ugbu a, ị nwere ike rịọ nlọghachi.
Inweta ikike na engines ọchụchọ siri ike zuru oke - ịbụ onye a ghọtara dị ka saịtị ọjọọ ma ọ bụ saịtị phishing abụghị ụzọ iji isi ihe nweta ihe ọchụchọ! Ọbụghị naanị na ihe nchọgharị na-egbochi ibe ahụ, ọbụlagodi ozi ịntanetị na-ezo aka na ngalaba ahụ ka ndị ahịa email nke oge a gbochiri PostBox.
N'ezie, ụzọ kachasị mfe iji hụ na ị nwetaghị ya bụ naanị ịwụnye plugins tụkwasịrị obi, melite nrụnye WordPress mgbe niile, ma gaa n'ihu nyochaa saịtị gị maka omume ọ bụla ọ bụla… dịka faịlụ niile edere na otu ụbọchị na oge. Lezienụ anya, ndị ibe ibe gị!
Mar 17, 2011 na 11: 37 PM
Akwa post. Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe m kwesịrị icheta na ịmepụta saịtị WordPress. Daalụ